Kedu ka esi agbaghara mmadụ ma kwụsị iwe?
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ezo n'ime mkpụrụ obi mkparị nye onye mejọrọ anyị. Ma nsogbu ndị a anyị onwe anyị na-ewepu ike na ike niile. Iwe iwe bụ ihe na-adịghị mma, na-ebibi mmetụta niile na-egbuke egbuke. Ka ị ghara ibibi ndụ gị, ọ dị mkpa ka ị ghọta otú ị ga-esi agbaghara mmadụ ma kwụsị iwe. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ dịghị mfe ịgbaghara, onye ọ bụla ga-agbalịrị ime ya
Olee otú ị ga-esi agbaghara nwoke ị kpọrọ asị?
Omume nke ụfọdụ ndị na-ahapụ mkpụrụ obi dị ilu na mkpụrụ obi. Mgbe nke a gasịrị, ọ bụ nnọọ ihe siri ike ịgbaghara mmehie, ịkpọasị na-erepịakwa anyị kpamkpam. Ọ dị mkpa ịghọta na iwe ahụ bụ ihe ọjọọ nke na-ebibi ihe niile dị mma gburugburu. N'ịkọwa ihe ọjọọ a n'onwe ya, mmadụ na-enwe obi ụtọ na-etinye ndụ ya n'ihe ọjọọ a.
Site na echiche nke nkà mmụta uche, ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta otú ị ga-esi gbaghara ma hapụ onye, ​​mgbe ahụ, ịmeela otu nzọụkwụ n'ụzọ ziri ezi. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ị chịkọta mkpesa n'ime onwe gị, ma ị mụta ụzọ isi kpochapụ ha, mgbe ahụ n'afọ ọ bụla, a ga-enwe ọtụtụ n'ime ha. Mkparị na-eme ka mmadu bia n'ọbọ, nke n'aka nke ya nwere ike iduga mmejọ na-egbu, mbibi na-ebibi.
Gbalịa iji nlezianya na-emeso ihe ọ bụla ọmụmụ na-ewetara anyị. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri ha ike, ma ọ bụrụ na ị mụta ịchọta nkwubi okwu ụfọdụ, ọ ga-enyere gị aka ịmalitewanye ike.
Olee otú ị ga-esi agbaghara onye ị hụrụ n'anya?
Onye a hụrụ n'anya na-enwekarị mmetụta karịa onye ọ bụla ọzọ. Ya mere, ihe nile nke sitere n'aka ya bu n'obi. Iji ghọta otú ị ga-esi gbaghara onye ị hụrụ n'anya ma kwụsị iwe, ị ga-aghọta ihe kpatara ya.
Ị nwere ike iwe iwe n'ụzọ dịgasị iche iche. Ọtụtụ mgbe, nsogbu ezinụlọ na-eduga n'ọgba aghara. Mgbe ha gasịrị, mkpuru obi jupụtara na-ezighị ezi, ị na-enwekwa mmetụta dị ka lemon squeezed. N'inwe iwe, onye nwere ike ikwu ọtụtụ okwu ọjọọ nye ibe ya na mgbe nke ahụ gasịrị, mmetụta niile dị nro na-apụ n'anya kpamkpam na mmekọrịta.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-emejọ onwe gị ma na-ebi ndụ, ọ ga-abụ na n'oge na-adịghị anya, mmetụta niile na-ezighị ezi ga-abịa ọzọ, nke a ga-ebute esemokwu n'ihi ihe kpatara ya. Iji gbochie nke a ime, a ghaghị enyocha esemokwu niile. N'ezie, nke a ga-eme naanị mgbe ị kwụsịrị. Gbalịa ghọta ihe ị na-ezipụ na ihe ị na-emejọ. Ndị na-eche echiche nke ọma na-ekwukarị ihe niile ma na-emepụta ihe efu nke na-adịghị anya n'eziokwu.
Nhazi nke esemokwu
Kedu otu esi mụta otu esi merie nsogbu?
Ihe a na-apụghị ikweta ekweta, mana nke bụ eziokwu - asịrị bụ uru
Usoro ịjụ ajụjụ
Kedu ka esi mee nne di gị ọgọrọ gị?
Kedu otu esi abanye ụra nke ụra?
Nsogbu a na - akpaghasị iche - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Kedu ihe bụ ịkwa emo - otu esi amụta ịkwa emo na nhụsianya?
Mmetụta mmetụta uche
Akụkụ uche mmadụ
Kedu otu esi meziwanye ọrụ ụbụrụ?
Olee otu esi enyere onye dara mbà n'obi?
Akwụkwọ ndị ọkà mmụta sayensị dị mma ịgụ
Ọkpụkpụ na ụmụ ọhụrụ mgbe nri - ihe ịme?
Tatar chak-chak - uzommeputa
Kedu otu esi eme ụlọ akụ?
Erythrazma - ọgwụgwọ
Cocktails na whiskey - echiche dị iche iche nke ihe ọṅụṅụ mbụ maka ọ bụla uto
Nwa ahụ nwere ahụ ọkụ nke 39 na-enweghị ihe mgbaàmà
Ọbara mgbe ịgba ọgwụ mgbochi
Ejiji sava na uwe 2013
Umu Okpueze 02
Ngwunye na oven
Ihe ịrịba ama nke cancer nke akpanwa
Esi esi esi nri buckwheat na otutu?
Enwere m ike ịtụrụ ime mgbe m mechara?
Kedu otu esi aṅụ mmanya ndị a na-atụcha ọhụrụ?
Nri na-abụghị nke carbohydrate
Kedu otu esi akpọ oku eze nwanyi?
Amber Heard kpebiri ịlụ di na nwunye
Parquet na aka aka